Wakiillo ka socda Real Madrid oo ku sugan London si ay heshiis ula gaaraan Eden Hazard – Gool FM
(Real Madrid) 15 Maarso 2019. Sida uu daabacay wargeyska “AS” ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa durba bilaawday wada hadalada ay kagala soo saxiixaneyso Chelsea xidiga reer Belgian ee Eden Hazard, inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee soo aadan.
Heshiiska Eden Hazard uu ku joogo kooxda Chelsea ayaa wuxuu dhacayaa sanada 2020, waxaana ilo wareedyo badan ay xaqiijinayaan inuu diiday laba dalab ay u soo bandhigtay Blues si uu u saxiixo heshiis cusub.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Chelsea ay ku qasbanaan doonto in ay iska fasaxaan Eden Hazard suuqan xagaaga ee soo aadan, si ay kaga fogaadaan in xili ciyaareedka soo aadan uu kaga dhaqaaqo beeca xurta ah, hadii uu laacibka reer Belgian ku adkeysto inuusan saxiixin wax heshiis cusub ah.
Hadaba wargeyska “AS” oo xiganaya dhigiisa England ee “The Sun” ayaa wuxuu sheegay in wakiillo ka socda Real Madrid ay ku sugan yihiin magaalada London si ay u gudbiyaan dalabka ugu horeeyay ay ku doonayaan Eden Hazard, kaasoo gaarsiisan 82 milyan oo euros.
Yeelkadeed, Chelsea ayaa isku dayi doonta inay ku dhaganaato adeega Eden Hazard inta ay awoodo, inkastoo uu halis ugu jiro inuu isaga tago xagaaga 2020-ka beeca xurta ah.
Macallin Sarri oo rajaynaya inuu ka fogaado inuu ku beegmo kooxdiisii hore ee Napoli isku aadka maanta la sameynayo ee Europa League